Waa kee qofka ugu awooda badan warshadaha wax soo saarka?
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Waa kee qofka ugu awooda badan warshadaha wax soo saarka?
Machadka Gaarka ah ee Xayeysiinta (ASI), waxbarashada ugu weyn, warbaahinta iyo ururka suuq-geynta u adeega $20.7 bilyan warshadaha wax soo saarka, ayaa maanta ku dhawaaqay liiska Power 50 ee sanadlaha ah ee maamulayaasha ugu saamaynta badan warshadaha. Phil Koosed, aasaasaha BAMKO iyo madaxa istaraatiijiyadda ee shirkadeeda waalidka, Kooxda Sare ee Shirkadaha, ayaa loo magacaabay lambarka 1 ee dadka ugu awoodda badan warshadaha.
Inta soo hartay shanta ugu sareysa waxay ka kooban yihiin hoggaamiyeyaasha warshadaha oo leh saameyn fog. Waxay kala yihiin, siday u kala horreeyaan: Jonathan Isaacson, CEO/gudoomiyaha Gemline; Jo-an Lantz, CEO/madaxweyne Geiger; Jeremy Lott, madaxweyne/gudoomiyaha SanMar; iyo Marc Simon, Maamulaha Guud ee HALO Branded Solutions.
Qiimaynta gaarka ah ee sanadkan ayaa waxaa ka muuqda hogaamiyayaal shirkado badan oo si guul leh u dhaqaajiyay ganacsigooda intii lagu jiray cudurka faafa ee coronavirus. Hoggaaminta Koosed waxay lama huraan u ahayd BAMKO inay dhex gasho PPE, taasoo si weyn gacan uga geysatay inay shirkaddu kordhiso dakhligeeda xayaysiinta ee Waqooyiga Ameerika 78.5% ilaa $194 milyan sannadka 2020 - korodhka ugu weyn ee sannad-sannadka ka mid ah 40ka shirkadood ee ugu sarreeya ee qaybinta.
"Hambalyo dhammaan hoggaamiyeyaasha, aragti-yahannada iyo horyaallada shirkadaha oo ay ku jiraan awoodda sharafta leh ee 50. Waxay yihiin kuwa ugu fiican ee ugu wanaagsan," ayuu yiri Timothy M. Andrews, madaxweynaha ASI iyo maamulaha.
Warshadaha alaabooyinka xayaysiisyadu waxay ka kooban yihiin alaab-qeybiyeyaal soo saara, ilaha iyo/ama daabaca badeecadaha iyo qaybiyayaal suuq geynaya oo ka iibiya alaabtaas macaamiisha. Noocyada ugu waaweyn adduunka, oo ay weheliyaan kuwa aan faa'iido doonka ahayn, dugsiyada, isbitaallada iyo ganacsiyada yaryar, waxay inta badan bixiyaan alaabada xayeysiiska ah si ay u xayeysiiyaan shirkadooda ama dhacdada iyo inay u mahadceliyaan shaqaalaha iyo macaamiisha.
ASI waxay daaha ka rogtay La-taliyaha 2021 Power 50 inta lagu guda jiro Shirarka Korantada ee ASI. Munaasabaddii ugu horreysay ee warshadaha xayeysiinta ayaa ka muuqday hadal muhiim ah Richard Montañez, kaas oo ka soo kacay waardiyaha Frito-Lay una noqday madaxweyne ku xigeenka PepsiCo.
La soo bandhigay 2006, La-taliyaha Awooda 50 ayaa sannad walba iftiimiya qaybiyaha iyo maamulayaasha alaab-qeybiyaha kuwaas oo saameyn weyn ku leh suuqa xayeysiinta.